Semalt: Ihe Ntanetị Weebụ kachasị mma iji wepụ Data Online
Nchịkọta ọdịnaya ma ọ bụ ihe nchọgharị weebụ bụ usoro nke iji software pụrụ iche ma ọ bụ ngwa weebụ iji mee ka ọdịnaya dị na weebụsaịtị. Scraping na-arịọ ndị webmasters na ndị mmepe chọrọ ịnweta ngwa ngwa iji nweta ozi dị na saịtị ndị ọzọ.
Ngwa nchịkọta ọdịnaya
Nchịkọta weebụ nwere ike ime ihe obi ọjọọ maka iji ahịa email, spamming , na robocalls. N'ihi nke a, ọtụtụ webmasters na-ahọrọ ịnọpụ na ya. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịme ihe ntanetị weebụ nwere ike ịbụ ụzọ siri ike iji nweta uru dị iche iche nke ọrụ weebụ.
Olee Otú E Nwere Ike Isi Mee Ntucha
Ka anyị tụlee ndekọ ederede nke hotels niile dị n'ógbè ahụ. Ọ bụrụ na onye na-emepụta weebụ chọrọ ikpochapụ ụlọ ọ bụla na ụlọ nkwari akụ ọ bụla, ọ ga-etinye ha na nchekwa data ahụ aka. Usoro a na-ewekarị iri puku kwuru iri puku iji hụ na ụlọ ọrụ ọ bụla dị na mba ahụ gụnyere. Na scraper web , otu webmaster nwere ike itinye ajụjụ ọchụchọ ma kpokọta data ahụ na-akpaghị aka site na ọtụtụ saịtị.
Wụpụta ma ọ bụ Zụrụ Weebụ Web?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ngwá ọrụ ntanetị weebụ, ị nwere ike ịmepụta otu site na ncha ma ọ bụ jiri onye dị ugbu a. Ọtụtụ ndị mmepe enweghi nkà, ihe ọmụma, ngwá ọrụ, ma ọ bụ ihe onwunwe iji rụọ ọrụ ngwa ngwa aka. Ozi ọma ahụ bụ na e nwere ọtụtụ ndị na-achọpụta ihe ndị a na-ahụ maka ya.
Ụzọ na Usoro eji eme ihe na Weebụ Web Scraping
Ọ bụrụ na ị na-aga ịmepụta onwe gị, ọ dị gị mkpa ịghọta ihe nkà na ụzụ na-etinye na nchịkọta data. A na-ejikarị HTML eme ihe ka ọtụtụ scrapers, na-eji DOM na-etinye (na-agbanye ihe ngosi ihe odide akwụkwọ) iji nyochaa site na HTML iji wepu naanị ozi achọrọ. Ị ghaghị ịchọpụta ihe ndị ị na-achọpụta, nkwụsị, klas, na depụta ihe ịchọrọ ịchọrọ ịchọta ma tinye ha n'ime ntọala gị.